Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 22, 2020 00: 35 No Comments
Tusaale ahaan dil xayawaan si loo cuno, kaneeco loo dilo, disho cayayaanka na dhibaya, guryaheena dumiya, dilaya xayawaan xasaasiya ?? Marka miyaan kulligeen isku dilnaa ?? C ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 22, 2020 00: 15 No Comments
Ka dib shirkii Berlin ee 1884, Talyaanigu waxay isu diyaarinayeen inay gumaystaan ​​Itoobiya. Waxay isku dhaceen muwaadin Itoobiyaan ah, Ménélik II, kaasoo dagaal naxariisla'aan kula jira ...	Akhri wax dheeraad ah
Yurub dhexdeeda, Talyaanig iyo Faransiisku waxay ku bixiyaan qiimo culus boqolaal xaaladood oo dhimasho ah. Wadamada kale ee reer Yurub iyo dunida inteeda kale lama badbaadin. Sidan waa sida qaar…	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 22, 2020 00: 00 No Comments
Waxaa loo yaqiinay doorka Durcilla Winters ee "Dabka Jacaylka", Aktarada Victoria Rowell waxay xidhataa dharka sare sawirka Obama korkeeda iyo dhoolla caddayn buuxda…	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Maarso 14, 2020 00: 33 No Comments
Ciyaarta: 1. Tennis 2. Kubadda Koleyga 3. Kubadda Koleyga 4. Kubadda gacanta 5. Hockey	Akhri wax dheeraad ah